Lindson-Hawley — Steemit
goldbloger-6 (34)in #esteem •3years ago
နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အနည်းဆုံး 15 ဦးစီးကရက်တစ်ရက်သောက်သည်တဲ့သူပေမယ့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စီစဉ်နေသောအင်္ဂလန်မှာနီးပါးလူပေါင်း 700 ကြည့်ရှုကြ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကနှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်နုတ်ထွက်သည့်ရက်စွဲထားကြ၏။ သူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကျပန်း
ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ရန်, ထို့နောက်သူတို့၏ဆေးလိပ်ဖြတ်နေ့စွဲသည်အထိပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့တာဝန်ကျတယ်။ အခြားတစ်ဝက်တဖြည်းဖြည်းချိန်းချက်သောနေ့ရက်အထိဦးဆောင်သည့်နှစ်ပတ်ကျော်ကသူတို့ရဲ့ဆေးလိပ်လျှော့။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများသွားဖုံး, lozenges နှင့်ပါးစပ်မှုန်ရေမွှားများကဲ့သို့ထုတ်ကုန်အနေဖြင့်အပြုအမူအကြံပေးခြင်း, နီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတေသီအောင်မြင်မှုတိုင်းတာလမ်းကိုခြောက်လအကြာမှာထို့နောက်ဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်ရက်စွဲပြီးနောက်လေးပတ်ဆေးလိပ်မသောက် abstinence မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးနှင့်။ တဖြည်းဖြည်း-ချုပ်ရာအုပ်စုတစ်စုထက်ကိုအကောင်းဆုံး-အကြောင်းကို 25% ပိုကောင်းကရုတ်တရက်ဖမ်းနုတ်ထွက်သူများသည်။ တဖြည်းဖြည်းအုပ်စုတစ်စု၏ 39% စဉ်များနှင့်ရုတ်တရက်အုပ်စုတစ်စု၏ 49%, အောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းအုပ်စုတစ်စု၏ 15% စဉ်တဝက်နှစ်အမှတ်အသားမှာ, ချမ်း-ကြက်ဆင်အုပ်စုတစ်စု၏ 22%, ဆဲမီးခိုး-လွတ်ကြ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာ, နောက်ထပ်လူများကိုသူတို့တဖြည်းဖြည်းထက်ရုတ်တရက်နုတ်ထွက်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ကဆိုသည်။ သို့သော်လူတစ်ဦး၏ဦးစားပေးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကွာခြားချက်များစွာလုပ်မပေးခဲ့ပါ
ဘူး။ "လူတွေကတဖြည်းဖြည်းဖြတ်ချင်ခဲ့ရင်တောင်သူတို့ရုတ်တရက်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြပါတယ်" ဟု Lindson-Hawley ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသနနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိရောက်သောဆေးလိပ်ရပ်နားခြင်း tool အဖြစ်သက်သေပြခံရဖို့သေးရှိသည်သောက e-စီးကရက်အပါအဝင်ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာ၏အခြားအလားအလာပုံစံများမှာမကြည့်ခဲ့ပေ။ ထိုအပင်အအေးပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်ဖြတ်သော်လည်း, Lindson-Hawley "ကျနော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းအုပ်စုတွင်တွေ့ရသောဆေးလိပ်ဖြတ်နှုန်းနေဆဲအတော်လေးကောင်းသောကြတယ်။ " အနာဂတ်သုတေသနမှာတော့သူမကသူတို့ကပိုလုပ်နိုင်ပါလျှင်ကြည့်ဖို့ဖြတ်တဖြည်းဖြည်း၏နည်းလမ်းများလေ့လာစူးစမ်းဖို့စီစဉ်ထားကပြောပါတယ် ထိရောက်သော။ "တကယ်သူတို့ရုတ်တရက်ဖြတ်လို့မရပါဘူးခံစားရတယ်, သူတို့
3 years ago in #esteem by goldbloger-6 (34)
တဖြည်းဖြည်း၏နည်းလမ်းများလေ့လာစူးစမ်းဖို့စီစဉ်ထားကပြောပါတယ် ထိရောက်သော။ "တကယ်
Congratulations @goldbloger-6! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @goldbloger-6! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @goldbloger-6! You receivedapersonal award!